Kunzima ukwelapha ukuthuthwa kwendle esibhedlela? I-SH Technology ihlole indlela yayo
Isikhathi: 2020-04-24 Hits: 81
Izidingo eziphezulu zokuphepha
Imithombo yokuthuthwa kwendle ezibhedlela iyahlukahluka, ikakhulukazi kubandakanya umnyango we-radiology, umnyango we-stomatology, umnyango wamacala, igumbi lokusebenzela, amagumbi okuhlola ahlukahlukene, igumbi lokuhlanza impahla, i-canteen neminye iminyango. Ukuthuthwa kwendle kukaCanteen njll.
Ukukhucululwa kwendle kwezibhedlela kuyinkimbinkimbi ukwedlula ukuthuthwa kwendle okuvamile. Ukungcola okuyinhloko kokukhuculula kwendle esibhedlela kuqukethe ama-microorganisms we-pathogenic (inani eliphelele lama-bacteria, i-Bacillus anthracis, i-Vibrio cholerae, igciwane lokuphefumula lokuqina, njll.), Kanye nokungcola okulimazayo nokulimazayo okungokomzimba nokwamakhemikhali (okhiqizwe izidakamizwa ezisetshenziswa ezibhedlela futhi ezingezwe ngamagciwane) Eminye imikhiqizo inani elikhulu lezinto eziphilayo nezinto ezingaphili eziqukethwe ekukhuculweni kwendle okufuywayo nokungcola kwe-radioactive kunobuthi kakhulu futhi kuyingozi. Ngakho-ke, izidingo zokuphepha kwezinhlelo zokwelapha indle zasesibhedlela ziphezulu kakhulu.
Ukumelana okunamandla nomthwalo wethonya
Izinga lamanzi okukhuculula indle esibhedlela alizinzile, futhi izinto ezifana nesikhathi sesikhathi, isizini, isikali, inani lemibhede, isibalo sodokotela kanye nenani labasebenzi liyashintshashintsha. Umthamo wamanzi ophakeme wale projekthi ungaphezu kokuphindwe ka-1.5 umthamo wamanzi ojwayelekile, futhi inani eliphakeme lokuphuma ngokuvamile livela ngo-8-12 ekuseni no-3-8 pm. Ngakho-ke, uhlelo lokwelashwa kokukhuculula indle esibhedlela kufanele lube nezimpawu zomthamo oqinile wokulwa nomthelela, futhi luhlangabezana nezidingo zekhwalithi yamanzi esebenza kahle nganoma yisiphi isikhathi.
Ukusebenza okungaphansi komhlaba nezidingo zokungcoliswa kwesibili
Indawo isibhedlela ikhethekile. Uhlelo lokwelapha ukuthuthwa kwendle luvame ukufakwa esibhedlela futhi lune-limited footprint. Ngakho-ke, uhlelo lokwelapha indle kufanele lube nendawo encane. Umsebenzi oyinhloko wesibhedlela ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokwelashwa nokunikeza indawo yezempilo enempilo nenempilo yeziguli. Uhlelo lokwelashwa kwendle kufanele lube nezimpawu zokukhiqiza udaka olungatheni, umsindo omncane, imikhiqizo esetshenziselwa ukubulala magciwane, iphunga elincane, ukubeka uphawu okugcwele, ukungcoliswa kwesibili, nokusebenza okuzenzakalelayo.
Okwedlule: Kungani ukwelashwa kwamanzi amdaka kubaluleke kangaka?
Okulandelayo: Izinzuzo zenqubo yokuphathwa kwamanzi amdaka ye-MBR